Muwaadin udhashay Mareykanka oo Lagu dilay Deegaanada Puntland |
Muwaadin udhashay Mareykanka oo Lagu dilay Deegaanada Puntland
Wiilkan Soomaaliga ah ee kasoo jeeda Gobolka Minnesota heystana Dhalashada wadanka Mareykanka ayaa la sheegay inuu u dhintay jirdil loogu dhaxgeystay iskuul nuuca la seexdo ah oo ku yaalla Deegaanada maamulka Puntland.
TV-ga FOX 9 ee wadanka Mareykanka oo lahadlay Waalidka dhalay wiilkan ayaa sheegay iney aamisanyihiin in wiilkooda loo dilay “Ahaanshaha Mareykan”, ayna ka murugsanyihiin dilka wiilkooda.
Ammar Abdirahman , oo 17 sano jir ah waa wiilka lagu dilay Puntland waxa uu ku dhashay Minnesota , balse bishii December sanadkii hore ayaa waxaa soomaaliya usoo diray Qoyskiisa si uu dalka gudihiisa ugu barto Dhaqanka Soomaaliyeed.
Hooyada dhashay Camaar ayaaa FOX9 u sheegtay “ Wiilkeygu waxa uu ahaa qof wanaagsan , waxa uu jeclaa inuu dadka su’aalo weydiyo ,aad buu u jeclaa Soomaalida ,balse waa a jirdileen waana ay dileen, wiilkeyga”.
Ehelada wiilka ladilay oo FOX9 la wadaagay sawiro laga soo qaaday Meydka Camaar yaa muujinaye jirdil iyo garaac xoogan oo wiilkan dhintay korkiisa kamuuqday.